Waxyaabaha ey xaqa u leeyihiin qaxootiga dhuumaaleeysanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waxyaabaha ey xaqa u leeyihiin qaxootiga dhuumaaleeysanaya
La daabacay tisdag 16 maj 2017 kl 16.35
30 000 oo ruux ayaa heley dar-yeel caafimaad 2015
Day-yeel caafimaad ee la siinayo nin dhuumaaleeysi dalka ku jooga. sawir: Karin Tengby / Röda Korset / TT
ISKUULKA: Dhallaanka sharci-darrada dalka ugu sugan waxey xaq u leeyihiin sida dhallaanka dhiggooda dugsi hoose/dhexe ama wax-barasho u dhiganta. Sidoo kale dusgi sare ama dugsiyada sare ee khaaska, haddii ey iskuulka bilaabeen intii aaney buuxin da’da qaan-gaarka ee 18 sannadood.
Qiyaastii waxaa dalka Sweden iskuullo ku dhigta dhallaan gaarsiisan 2 000-4 000 oo sharci-darro dalka ku jooga. Maamullada degmooyinka ayaa taageero dhaqaale dawladda uga dalban kara dhallaankaa, sannadkii 2016 ayay hayadda maamulka iskuulladu u qeeybisay degmooyinka u fidiya tacliinta dhallaanka dalka ugu sugan sida sharci-darrada ah dhaqaale gaarsii-san 50 malyan.
dadyoowga dhuumaaleeysiga dalka ku jooga ayaa xaq u leh dar-yeel caafimaad ee oogada iyo midka ilkaha goorta aan laga maarmin ee aan lala sugi karin (akut), go’aankaasina oo ey tahay iney gaaraan howl-wadeennada caafimaadku.
Dadyoowga aan gaarin da’da qaan-gaarka ee 18-sannadood waxey xaq u leeyihiin dar-yeel caafimaad ee u dhigma midka dhiggooda oo ey ka helaan goobaha caafimaadka ee ku yaala nawaaxiga ey ku dhaqan yihiin. Sannadkii 2015 ayaa la diiwaan-geliyey tiro gaarsii-san 30 000 oo goobaha caafimaadka ey dar-yeel caafimaad ee oogada iyo ilkaha u doonteen dadyoow aan dalka sharci ku joogin (tira-koobkan ayaaney qeyb ka aheyn xogta booqashooyinkii dar-yeelka ilkaha Stockholm iyo Skåne, iyo dar-yeelka caafimaadka nawaaxiga Galbeedka Götaland).
Sannadkii 2015 ayaa lagu qiimeeyey kharashka hayd-goboleedyada caafimaadka kaga baxay dar-yeelka caafimaadka ee qaxootiga aan sharciga dalka ku laheyn illaa 150 malyan oo koron.